Afar kamid ah Gobollada Puntland waxaa kusoo wajahan arin halis ah. - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomePuntlandAfar kamid ah Gobollada Puntland waxaa kusoo wajahan arin halis ah.
Afar kamid ah Gobollada Puntland waxaa kusoo wajahan arin halis ah.
September 30, 2020 Ali Osman Puntland, Wararka Maanta 0
Wasaaradda Arrimaha deegaanka Beeraha iyo Isbedelka Cimilada Puntland ayaa soo saartay Digniin Cusub oo ku socota dadka degan Gobolada Bari, Nugaal, Sanaag iyo Sool, waxaana halkaas ku wajahan roobab xoogan oo sababi kara daadad.
Qoraal kasoo baxay Wasaaradda deegaanka Beeraha ayaa waxaa lagu sheegay in afarkaas Gobol laga qabsi qabo inay ka da’aan roobab sababi kara daadad xoogan, isla markaana daadadka ku rogmadaan deegaano ka tirsan Goboladaas.
Dadka deggan deegaanada ay dhulalkoodu hooseeyaan, meelaha biyo mareenka ah iyo Togaga ayaa loogu baaqay inay ka digtoonadaan daadadka ka dhalan kara roobabka xoogan ee ku wajahan Gobolada Bari, Nugaal, Sanaag iyo Sool.
Digniintan kasoo baxday Maamulka Puntland ayaa waxaa ay kusoo aadeysaa, iyadoo saacadihii lasoo dhaafay roobab xoogan oo dabeylo wata ay ka da’een Gobollada Sool iyo Cayn.
Roobabka ayaa siweyn uga da’day Magaalada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool iyo deegaanada hoostega, isla markaana waxaa roobabka ku diirsaday dadka iyo duunyada.
Sacuudiga oo soo saaray shuruudo cusub oo la xiriira gudashada acmaasha Cumradda.
Olole Muhiim ah oo ka bilaawday Xaafadaha Magaalada Laascaanood.